Muuqaal: Xisbiga Waddani ” Itoobiya Kama Qayb Galin Balaadhinta Dekadda Berbera” Maxaa iska badalay Heshiiskii | KALSHAALE
Muuqaal: Xisbiga Waddani ” Itoobiya Kama Qayb Galin Balaadhinta Dekadda Berbera” Maxaa iska badalay Heshiiskii
Oct 11, 2018 - 6 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Xisbiga wadani ayaa sheegay ka hadlay SHirkadda DP World oo mar kale dhagax dhigtay dekedda magaalada Berbera, Iyadoona Muddo Saddex sano ah aysan ka Qaban wax Muuqda.
Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Xubno ka tirsan Shirkadda DP World ayaa ka Qayb galay munaasibad ka dhacday Berbera, waxaana Xisbiga wadani oo Su’aal ka keenay Sababta itoobiya meesha uga Maqan tahay, Iyadoo markii hore uu Heshiisku ahaa Saddex Geesood.
Shirkadda DP World ayaa dhowaan waxaa dalkeeda kasoo saartay Dawladda Jabuuti.
Reer waddani dawakhaada joojiya daahfurka baladhinta dakada qasab maaha inuu tago madaxwaynuhu se shir saxaafadeed Kani xafladii madaxtoyada kahor ayuu dhacay saxeexii shirkad ii qandaraaska qaadatay saxeexii amuurihii oodhani waa Kan daawasho wacan oo yaan Isha laysku qaloocin
Xisbiga wadani waa meel joogsade cadhada kulmiyuu diinta uga baxayaa wadani ? Dekeda yaa leh qasab maaha inay yimaadaan jaarkeenu ee farxaddii horumarka dalkeena la qaata wadani
Waxaa kale oo xusid mudan inay jam somland ogaato cadaawada iyo hinaasaha somaliya ? Somaliya waa ardul xasad ilaaha naga kaxeeyey baa mahad leh
Caqli xumada somaliya saldhiga ber bera way diidan yihiin saldhigga turkigana waay ogolyihiin qaramada midoobay baanu tusnay una turjunay? Waa sidaad sheegeyseene caqli ma leh somaliya ? Caqli baanu u ahayn oo tiibay doonayaan mana dhacayso oo dal gaaraan nahay
Somaliya siyaasad xumo waxay ka taagantahay halka ugu xun ee ugu hoosaysa sida saldhiga iyadana u fasay inay yeelato jam somland ay ugu diidayso? Dekeda ber bera waxa leh jam somland saamiga iyo goobjoognimadu waa kala laba ? Yaa muqafaliin raggii hagi jiray bahashaa maqan oo xorobay dal kale ah